yoga kahle kuvuselela umzimba nomphefumulo. Kodwa ngaphandle nokulungiselela efanele kanye instructor esihlakaniphile, alimale futhi ucasukile esikhundleni umzimba ophilile umoya. Ngakho-ke kubalulekile ukuba ukhethe ngokucophelela endaweni ukufunda. Lesi sihloko sizosisiza sihlole izikhungo yoga e Moscow, ikheli kanye nokubuyekeza ngazo.
"Ashtanga" Yoga Center
Asiqale isilinganiso yoga izikhungo eMoscow "Ashtanga" club. ikheli lakhe: Moscow, Old Tolmachevsky Lane, 7, endaweni isikhungo samasiko zokungcebeleka "Orbita". District CAO, District Zamoskvorechye.
Yoga Center "Ashtanga" waqala ukuphila yayo ngo-1999. Isebenzisa othisha abaqeqeshiwe, kuhlanganise ezimbili isikhathi iqhawe emhlabeni neyethusi medalist ngesikhathi umdlalo yoga. Abafundisi nezazi eziningi babe eminyakeni engaphezu kuka-20 nakho, kanye imfundo ephakeme wezokwelapha.
Ukuqala isifundo, ubone isimiso, lungiselela izingubo ukhululekile futhi aye esikhungweni. Akunandaba noma iminyaka yakho noma ezingeni kokufaneleka. Yoga Center "Ashtanga" inikeza izinhlelo ahlukene Wabasaqalayo futhi ukuqeqeshwa okunzulu amakhasimende abanolwazi. Ngaphezu kwalokho, isikhungo inikeza ukwelashwa yoga, i-yoga ukuze izingane, ukuzindla, nezinye izinhlelo eziningi.
Bambalwa izikhungo yoga eMoscow kungaba ukuziqhayisa okubuyayo ayethule. Kodwa "Ashtanga" isikhungo kuphumelele. Zonke izivakashi enanikade lapha, basutha. Ikakhulukazi olumnandi amakhasimende efaneleyo yothisha. Abantu abaningi bathi le izinqola khumbula wonke umuntu owake waba namazwi esikoleni, futhi kwakha isibopho esikhethekile phakathi uthisha kanye isivakashi. Ngaphezu umsebenzi okhokhelwayo labayali, amakhasimende amaningi athi ingaphakathi nice inhliziyo yoga.
Yoga Center Yoga Practika
Indawo isikhungo: Moscow, ul. Krasnaya Presnya, 46, 2nd Floor, inkaba yesifunda, Presnensky District.
igama esifushanisiwe isikhungo yoga - YP. Kuyo kukhona umoya serene futhi enokuthula. I design ingaphakathi kuhlanganiswe Oriental isiko imigqa kanye izitayela European. Lesi sakhiwo ezintathu storey iyisonto namakamelo abanzi ngoba yoga, massage amakamelo, ikhefi, endaweni egumbini lokuhlala kanye esitolo for yoga ne ezixube imikhiqizo.
Izibuyekezo ze-yoga isikhungo YP
Yoga Center Yoga Practika It has a lot of okubuyayo. Amakhasimende athi umoya omuhle, abaphathi friendly nothisha abaqeqeshiwe. Ngaphezu kwalokho, izivakashi eziningi ukuthini, maphakathi YP value esihle kakhulu imali. Labo abake bazama ukwenza kule sikhungo zalujabulela umphumela bese eluleka ke bonke abangane bami.
Yoga Center "Shambhala"
Ukuqhubeka ne izikhungo yoga e Moscow, kufanele ayeke omunye wabo, enesihloko esithi "Shambhala". Ikheli isikhungo: Moscow, emgwaqweni kaMarx, 9, District Centre, Tagansky wesifunda.
"Shambhala" Yoga Center Kuyinto ephelele bonke abafisa silondoloze ukuma kwabo ngokomzimba uphumule ngokwengqondo. Inombolo yomhlaba wonke yesikhungo ziqasha abafundisi professional obani njalo ukukusiza futhi aphendule yonke imibuzo yakho. Kukhona ibha lovely lapho ungakwazi ukujabulela cocktail kabusha noma isidlo ukudla okunempilo. Yoga Center "Shambhala" inikeza spa izakhiwo kanye massage therapist abaqeqeshiwe. Kule ndawo ungakhululeka bese rejuvenate.
Uphenyo "Shambhala" isikhungo
Zonke izikhungo yoga eMoscow efuna ukuzuza kholeka among the izimbangi nokubonisa side yabo engcono amaklayenti. "Shambhala" uyawuthanda ukuthandwa okukhulu. Izivakashi ujabula kakhulu imiphumela khona. amakhasimende abaningi bathi ukuhlanzeka isikhungo, isimo yokwamukela nothisha unake nokhathalelayo. Abantu abathi ukuthi ukuvakashela okungenani kanye isikhungo yoga "Shambhala", ungafuni ukuya yimuphi omunye.
Yoga isikhungo "Prana"
Uma ucabangela izikhungo yoga owaziwa e Moscow, kufanele sinake ezinjalo ngokuthi "Prana". indawo yayo: Moscow, Zoological emgwaqweni, 4, District Centre, Presnensky.
Umsebenzi Yoga "Prana" isikhungo wavula ngo-2007. Ukusungulwa inikeza izinhlelo ezilandelayo:
Othisha friendly futhi anake eyokusiza ukuba uwufinyelele uqinile ngokomoya futhi wamukele ingxenye ajabule ngemuva sizofunda. Ngaphezu kwalokho, phakathi nendawo "Prana" linikeza ukubhucungwa umzimba kanye yoga kwabesifazane abakhulelwe.
Uphenyo "Prana" isikhungo
Ngokuvamile, maphakathi "Prana" Yoga has a lot of okubuyayo. amakhasimende amaningi ngempela ingaphakathi yokudlela, isimo ethokomele nokuhlanzeka. Ezinye izivakashi ukugcizelela ngamanani aphansi amasevisi, okuyinto musa kuthinte izinga izisebenzi.
Nokho, kuyafaneleka ukuthi "Prana" futhi Izibuyekezo ezingezinhle. Ezinye izivakashi evince ukunganeliseki umsebenzi abanye othisha bathi ukuba luhlaza kwabo futhi ngokomsebenzi engiwenzayo. Ngaphezu kwalokho, igumbi sigqoka amancane ikhabethe futhi ungakhululekile impango umbono jikelele lesikhungo.
Yoga esikoleni "Impilo Kwesizwe"
Lesi sakhiwo itholakala kuleli kheli: Moscow, emgwaqweni Malaya Ordynka, 25, kulungile Orda District, District Central, Zamoskvorechye wesifunda.
Ngenxa yalesi sikole yoga "Impilo Kwesizwe", abantu abaningi azibonayo yoga ukujula, ukuthuthukisa umzimba wakho nengqondo. Liyakwazi izifundo ngazinye, iqembu kanye zenkampani enikeziwe futhi ukuhlola umfundisi ekhaya iklayenti.
Lesi sikole inikeza ezindaweni ezilandelayo nge-yoga:
Uhlelo "Healthy emuva".
Nge kuvumelana nezimo amasheduli isivakashi ngasinye ekhetha isikhathi ukuthi kulungile. Zonke abafundisi ku "Impilo Kwesizwe," isikole has a lot of isipiliyoni ezihlekela futhi unesimo sengqondo wemfanelo emsebentini wabo.
Izibuyekezo School of Yoga "Impilo Kwesizwe"
Le ndawo has a lot of okubuyayo kusukela kubavakashi. Wonke amakhasimende waphawula efaneleyo okusezingeni eliphezulu kanye nomthwalo wemfanelo besizwa abaqeqeshi babo, kanye Inani elihle imali kanye nekhwalithi yesevisi. Ngokusho izivakashi eziningi, isikole ihlale ihlanzekile, ukhululekile futhi kokuhlala ezimnandi.
"Yogasveta" Yoga Center
Ukuze uqonde ekahle ezingokwenyama nezingokomoya, kubalulekile ukuthi bahlanganyele ebucikweni basendulo - yoga. Centre "Yogasveta" umema bonke abafisa ukwenza ngcono isimo zazo ezingokwenyama nezingokomoya. Ukuze lokhu okuyinhloko, abasebenzela isikhungo, akunandaba yini izinga lakho kokufaneleka ngokomzimba. Othisha ukuthola indlela siqu amaklayenti ngamunye nokuthuthukisa uhlelo ngaye. Lapha, kuzosiza ukuthuthukisa ikhono lakho ukwenza umzimba oqinile futhi ductile.
"Yogasveta" inikeza izinhlelo ezilandelayo ukuqeqeshwa:
Yoga in useyili (fly yoga).
Yoga kwabesifazane abakhulelwe.
Yoga ngabantu abadala.
Lesi sikhungo Sokubambisana ingatholakala engosini ethi: esifundeni eMoscow Dolgorudny, Likhachevsky onguthelawayeka, 10 K2.
Lesi sikhungo yoga zithandwa kakhulu. Zonke amaklayenti lesikhungo bayajabula. Abaningi babo waphawula nobuchwepheshe bale abaqeqeshi, ukunakekelwa nesimo sawo sengqondo wemfanelo umsebenzi wabo, bakuthola indlela siqu amaklayenti ngamunye. Futhi, izivakashi eziningi ukusho amakamelo kahle esimisiwe, lapho zibona ukuhlanzeka nokuhleleka wobungane kule sikhungo. Ngaphezu kwalokho, abantu abaningi abathi, intengo amasevisi lapha quality kuyavumelana.
Centre "Kerala" yoga
Futhi ekugcineni, cabangela omunye ethandwa ngokulinganayo yoga isikhungo "Kerala". Itholakala ekhelini: Moscow, Michurinsk avenue, 3, District West, District Ramenky.
Lapha ungakwazi ukuhlola izinto ezimangalisayo futhi emuhle yoga, ukuqinisa umzimba wakho futhi umoya. Centre "Kerala" linikeza uhlelo eminingi yasendulo wezokwelapha, ozokusiza ngcono futhi rejuvenate wonke umzimba - Ayurveda.
Kukhona masseurs abangochwepheshe emsebenzini wabo zisebenzisa amafutha okwelapha ahlukahlukene. Ngosizo wazibonela yogaterapevtov umzimba wakho iyoba nezimo xaxa, zisitshela ukuthi izifo eziningi ezingapheli.
Baphinde babe yoga kwabesifazane abakhulelwe nezingane, ngakho-ke lokhu nendawo ephephile kungenzeka ukuba nawo wonke umndeni.
Uphenyo isikhungo "Kerala" yoga
Izibuyekezo ezingezinhle "Kerala" akulona nhlobo. Wonke amakhasimende benelisekile uphinde ubuye lapha ngokuphindaphindiwe kakade nabangani kanye nomndeni wabo. Izivakashi waphawula efaneleyo eziphakeme abelaphi nothisha bekulungele futhi uchaze qualitatively, aphendule yonke imibuzo futhi ekulungele ukusisiza kunoma isiphi isimo. Ngokukhethekile ikhokhelwa ukuze wonke amakhasimende kwakha isimo esihle friendly enhliziyweni. Lapha, isivakashi ngasinye iphathwa ngokuqonda nangokuthuthumela.
Ngakho, sabuka elidumile izikhungo yoga ambalwa eMoscow. Ngamunye wabo, nahlulele by ukubuyekezwa, ezinhle ngendlela yalo, kodwa lokho ncamashi ukuya, kuphuma kuwe.
Indlela ukwenza i-yoga asanas
Yini ebangela tindilinga amnyama ngaphansi kwamehlo abesifazane? Indlela ukususa tindilinga amnyama ngaphansi kwamehlo: ukuphathwa, okhilimu noma amakhambi abantu
Ukuhlala uthokomale ufunde ngoba curls ezinkulu - indlela ukukhetha ngensimbi curling
Yini igazi endleni yabantu abanaleli amakati?
Saint Afanasiy Veliky wase-Alexandria: Biography, umlando kanye lwezincwadi